【 192.168.1.1 】 रूटर व्यवस्थापक लगिन र वाइफाइ कन्फिगरेसन .
कसरी लग इन 192.168.1.1?: को रूटर पासवर्ड र कन्फिगरेसन कसरी रिसेट गर्न मा चरण गाइड एक चरण
मा चरण पुस्तिका यस चरणमा कसरी को व्यवस्थापक प्यानल लगइन गर्न 192.168.1.1, हामी प्रत्येक चरण र निर्देशन मा एक नजर हुनेछ.
तपाईं यो पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई थाहा हुनुपर्छ के छ 192.168.1.1? तथापि, यदि तपाईंलाई थाहा छैन. गरेको यो द्रुत नजर होस्.
आईपी ​​ठेगाना के हो 192.168.1.1?
यो IP ठेगाना धेरै कारण लागि प्रयोग गरिन्छ, मुख्य रूप, आईपी ​​ठेगाना राउटर मा लग गर्न आवश्यक छ, प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड पनि राउटर गर्न लगइन लागि IP ठेगाना संग आवश्यक. आईपी ​​ठेगाना 192.168.1.1 को लागि linksys राउटर एउटा निजी IP ठेगाना जो प्रयोग गरिन्छ छ. विभिन्न निजी IP ठेगाना फरक नेटवर्किंग उपकरणहरू प्रयोग गरिएको छ.
आईपी ​​ठेगाना 192.168.1.1 को routers अधिकांश गरिएको छ, जो प्रयोगकर्ता आफ्नो राउटर विभिन्न सेटिङ कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ कि आयोजित. ठीक एक सुरक्षा विकल्प संचालन गर्न सक्नुहुन्छ, नेटवर्क व्यवस्थापन, DNS, प्रोक्सी, आईपी ​​QoS, लैन, Wan, डीएसएल, ADSL, म्याक, WLAN सेटिङहरू, WPS ब्लक; अरूलाई बीच.
पूर्वनिर्धारित, रूटर सबै निर्माता स्थिर IP ठेगाना यन्त्रमा प्रत्येक उपकरण र प्रयोगकर्ता संग जोडिएको छ भन्ने आईपी ठेगाना परिवर्तन गर्न अख्तियार दिइएको छैन बनाउँछ.
192.168.1.1 ठेगाना सामान्यतः पाहुना ठेगाना भनिन्छ.
तथापि, एक सजिलै सरल कदम निम्न द्वारा राउटर को प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ:
लग इन पृष्ठ, आईपी ​​ठेगाना लागि प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड 192.168.1.1
एक प्रयोगकर्ता अनधिकृत पहुँच देखि आफ्नो राउटर सुरक्षित गर्न चाहन्छ भने, त्यसपछि तिनीहरूले पूर्वनिर्धारित प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड परिवर्तन गर्न आवश्यक 192.168.1.1. पूर्वनिर्धारित प्रयोगकर्ता र कुनै पनि राउटर को पासवर्ड लागि जानता वा त्यसपछि कुनै पनि विचार छैन म मेरो राउटर को तल तस्बिरहरू दिइएको जस्तो बस यो चाल प्रयोग गर्नुहुन्छ भने.
जो कोहीले आफ्नो राउटर गर्न यसरी अनधिकृत पहुँच तपाईंको राउटर सुरक्षाको लागि पूर्वनिर्धारित प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड संग सजिलै लग इन गर्न, यो पूर्वनिर्धारित प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड परिवर्तन गर्न आवश्यक हुन्छ.
पहिलो, का लागि लग गर्न कदम मा एक नजर गरौं 192.168.1.1.
कसरी लग इन 192.168.1.1 सजिलो कदम संग IP ठेगाना?
यहाँ कसरी एक प्रयोगकर्ता चरणमा संग आईपी पोर्टल मा लग सक्छ. यो विधि निम्न द्वारा, प्रयोगकर्ता लग इन गर्नुहोस् सक्षम हुनेछ र सेटिङ र विन्यास जो प्रयोगकर्ताको राउटर सफ्टवेयर प्रयोगकर्ता प्रदान कन्फिगर गर्न अनुमति हुनेछ.
आईपी ​​ठेगाना 'खोल्न192.168.1.1ब्राउजरमा '. तपाईं आफ्नो स्मार्टफोन वा PC मा यो काम गर्न सक्नुहुन्छ, यो तपाईं इरादा छन् लग इन गर्न नै राउटर जोडिएको छ यो निश्चित छ कि बस बनाउन.
मामला मा त्रुटि छ, त्यसपछि सायद 192.168.1.1 छैन राउटर को आईपी ठेगाना हो. एक सरल Google खोज राउटर आइपि ठेगानामा हेर, वा निर्माता को वेबसाइट बताइरहेका द्वारा.
तपाईं जहाँ तपाईं राउटर गरेको प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड प्रविष्ट गर्न छ लगइन प्यानल पुनः निर्देशित हुनेछ.
यदि प्रयोगकर्ताले पूर्वनिर्धारित प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड कि राउटर आउँछ परिवर्तन भएको छैन, प्रयोगकर्ता दुवै क्षेत्रहरू मा व्यवस्थापक प्रवेश प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ.
प्रयोगकर्ता नाम: व्यवस्थापक र पासवर्ड: व्यवस्थापक.
तब ठीक क्लिक '’ वा सेटिङहरू प्यानल मा लग गर्न प्रविष्ट मारा.
तपाईंले व्यवस्थापक प्यानल मा लग, तपाईं कुनै पनि आवश्यक इन्टरनेट सेटिङ परिमार्जन गर्न सक्षम हुनेछ.
अब पूर्वनिर्धारित प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड परिवर्तन गर्न कदम मा एक नजर होस् 192.168.1.1.
पूर्वनिर्धारित प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड परिवर्तन गर्न कदम 192.168.1.1.
खुला 192.168.1.1 आफ्नो ब्राउजर मा.
तपाईँको पूर्वनिर्धारित प्रविष्ट प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड.
लगइन बटन क्लिक गर्नुहोस्.
ड्यासबोर्डमा मा, के तपाईं "देख्ने प्रयोगकर्ता नाम रिसेट & पासवर्ड विकल्प ", कि क्लिक गर्नुहोस्.
आवश्यक परिवर्तनहरू प्राधिकरण आफ्नो अवस्थित पासवर्ड भर्न तपाईं संकेत हुनेछ.
तपाईँको पूर्वनिर्धारित पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस्.
ठीक बटन क्लिक गर्नुहोस्.
हामी सिर्फ गर्न चरणमा मा एक नजर थियो पूर्वनिर्धारित प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड परिवर्तन 192.168.1.1.
कुनै पनि मौका द्वारा तपाईं आफ्नो आईपी ठेगाना बिर्सनुभयो भने, तल सजिलै रिकभर गर्न कदम हो.
कसरी व्यवस्थापक प्यानल प्रयोग रूटर वाइफाइ पासवर्ड रिसेट गर्न 192.168.1.1
हामी अक्सर हाम्रो वाइफाइ राउटर पूर्वनिर्धारित पासवर्ड हाम्रो इन्टरनेट जडान सुरक्षित र पनि सार्वजनिक रूपमा अनावश्यक पहुँच जोगिन हुनेछ जो परिवर्तन गर्न आवश्यक.
तपाईं राउटर वाइफाइ पासवर्ड कसरी छिटो परिवर्तन गर्न थाहा छैन त्यसैले त स्क्रिनसट सहित सरल तरिका मा दिइएको तल पुस्तिका पालना.
पहिलो आईपी प्रवेश गरेर व्यवस्थापक प्यानल जाने 192.168.1.1
चरण 1 : को जाने “वायरलेस” लग इन व्यवस्थापक प्यानल पछि.
चरण 2: पछि क्लिक गर्नुहोस् “वायरलेस” अब क्लिक गर्नुहोस् “वायरलेस सेटिङ”
तपाईंपी3: तल देखाइएको तपाईंले कहिले सेट वायरलेस क्लिक तपाईं व्यवस्थापक प्यानल देख्ने. अब तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो वर्तमान वाइफाइ पासवर्ड.
चरण 4: अब नयाँ पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस् जो राख्न तर यो याद र सुरक्षित पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस् राख्न चाहनुहुन्छ.
चरण5: अब पछि आफ्नो नयाँ पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस् माथि छवि मा उल्लेख रूपमा बचत बटन क्लिक गर्नुहोस्.
अब तपाईं सफलतापूर्वक आफ्नो राउटर वाइफाइ पासवर्ड परिवर्तन गरेका छन्.
रूटर को भूल आईपी ठेगाना रिकभर?
हाम्रो स्मृति सिद्ध छैन, प्रयोगकर्ता महत्त्वपूर्ण जानकारी बिर्सनुहुन्न गर्दा त त्यहाँ अवस्थामा हुन सक्छ. त्यसैले, परिवर्तित IP ठेगाना एक अपवाद छैन. यहाँ यो समस्या समाधान गर्न केही विधिहरू पाउन सक्नुहुन्छ:
को परिवर्तन ठेगाना पत्ता लगाउन, तपाईं तल-उल्लेख विधि जाँच गर्न सक्नुहुन्छ.
एक रूटर कसरी रिसेट गर्न मा कदम?
प्रयोगकर्ताले थिच्न सक्नुहुन्छ RESET को मा बटन पीठ रूटर र छ बारेमा लागि यो पकड 30 सेकेन्ड. यो प्रक्रिया रूपमा जानिन्छ राउटर रिसेट.
रिसेट पछि, रूटर फर्के गरिनेछ पूर्वनिर्धारित कारखाना सबै सेटिङ खाली गरिनेछ रूपमा. रूटर को IP ठेगाना हुनेछ 192.168.1.1 लग इन र पासवर्ड दुवै हुन "हुनेछ भनेर फेरि र पहिचान जानकारीव्यवस्थापक".
प्रयोगकर्ता रिसेट अन्तिम विकल्प हो भनेर निश्चित गर्नुपर्छ, किनभने यो सिफारिस गरिएको होइन रिसेट पछि अन्य अवस्थामा यो गर्न, गरियो कि सबै परिवर्तनहरू पूर्वनिर्धारित कारखाना पुनर्स्थापित हुनेछ.
एक प्रतिक्रियाविहीन रूटर कसरी निवारण गर्न?
यो कहिलेकाहीं हुन सक्छ रूटर प्रयोगकर्ता अन्तरक्रियामा गर्न अनुत्तरदायी हुनेछ कि. प्रयोगकर्ता लग इन गर्नुहोस् खोज्छ जब यो पासवर्ड स्वीकार छैन, र नेटवर्क प्रतिक्रिया पिंग लागि बनाइएको अनुरोध को कुनै पनि प्रकारको लिन छैन. अवस्थामा यस्तो प्रकारको मा, प्रयोगकर्ताले राउटर निवारण गर्न निम्न कार्यहरू प्रयास र न्यूनतम सम्भव समयमा समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्न सक्छन्.
एक प्रतिक्रियाविहीन रूटर समस्या निवारण गर्न कदम रूपमा छन्:
पहिले, केबल को जडान कि जाँच (इथरनेट उपलब्ध छ भने) ठीक वा छैन काम गर्दछ. पनि, बनाउन राउटरमा एलईडी स्थिति सक्रिय प्रदर्शन निश्चित. यदि, सबै सम्बन्धित एल ई डी चमकिलो छन्, यो राउटर शक्ति आपूर्ति भएको समस्या हुन सक्छ.
अब प्रयोगकर्ताले छ के थाह 192.168.1.1 आईपी ​​ठेगाना र कसरी गर्न routers को व्यवस्थापक प्यानल लग इन गर्न पूर्वनिर्धारित प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड परिवर्तन. प्रयोगकर्ता पनि यसको व्यवस्थापक प्यानल अन्वेषण र आफ्नो नेटवर्क सुरक्षित र छिटो बनाउन विभिन्न सेटिङ परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ.
सानो शब्द यो पोस्ट को लागि :
मैले तपाईंलाई प्रत्येक सम्भव जानकारी साझेदारी गर्न मेरो सबैभन्दा प्रयास र म बस व्यवस्थापक प्यानल लग इन गर्न कसरी लागि सरल प्रक्रिया थाहा नगर्ने मानिसहरूको लागि यहाँ मेरो ज्ञान साझेदारी गरेका, पासवर्ड परिवर्तन र IP ठेगाना प्रयोग राउटर रिसेट 192.168.1.1.
यो लेखको अपलोड जो सबै तस्बिरहरू जो सजिलो को लागि प्रयोगकर्ताहरूको लागि बुझ्न आफैलाई लिएको छन्. तपाईं अझै पनि भ्रममा वा राउटर लग इन सन्दर्भमा कुनै पनि प्रश्न छ भने त तपाईं केवल आफ्नो प्रश्न तल टिप्पणी गर्न सक्छन् म आफ्नो हरेक टिप्पणी जवाफ दिन मेरो सबैभन्दा प्रयास गर्नेछ.
मेरो लेख पढेर लागि यो ट्युटोरियल सहयोगी फेला पार्न भने बाटो धन्यवाद द्वारा त्यसपछि कृपया यसलाई प्रेम फैलाउने राख्न साझेदारी गर्न प्रयास गर्नुहोस् & शब्द. अघि एक राम्रो दिन छ !
192.168.0.1 व्यवस्थापक लगिन & राउटर सेटअप भन्छन्:
अप्रिल 27, 2019 मा 9:45 छु
[…] जस्तै अन्य ठेगाना 192.168.2.1 र 192.168.1.1 पनि routers अन्य ब्रान्डहरु प्रयोग गरिन्छ. पनि, केवल एक विशेष IP ठेगाना एकल द्वारा प्रयोग गर्न सकिन्छ […]